New Codeshare pakati peTurkey Airlines uye Gorofu Mhepo
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Bahrain Kuputsa Nhau » New Codeshare pakati peTurkey Airlines uye Gorofu Mhepo
Airlines • nhandare yendege • Bahrain Kuputsa Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Turkey Kuputsa Nhau
Gulf Air, Humambo hweBahrain mutakuri wenyika, neTurkey Airlines, mutakuri wenyika weTurkey, vakasaina chibvumirano chekodeshare nezuro icho chinenge chichiita kubva 1st November 2017. Chibvumirano ichi chichawedzera mikana yekufamba kwevafambi vendege mbiri idzi pamwe chete nendege mbiri dzezuva nezuva pakati peBahrain neIstanbul.
Mhemberero yekusaina iyi yakaitika kumahofisi makuru eTurkey Airlines kuIstanbul. Mutevedzeri Mukuru weGulf Air, Captain Waleed Abdul Hameed Al Alawi, uye Mutevedzeri Wachigaro weTurkey Airlines uye CEO, VaBilal Ekşi vakasaina chibvumirano pamwe chete pamberi pevakuru vakuru kubva kumabhazi maviri aya.
Ichi chibvumirano chitsva chekodeshare chichaiswa kune dzendege dzinoshandiswa nevatakuri vaviri kuManama neIstanbul, zvichiwedzera kudyidzana kwekutengeserana pakati pekambani mbiri idzi nenyika dzadzo vachipa vafambi vendege mbiri dzimwe nzira dzekufamba pakati peBahrain neTurkey.
Gulf Air neTurkey Airlines imwe neimwe inofamba nendege yezuva nezuva pakati peBahrain neIstanbul uye, pasi pechibvumirano ichi, vese vatakuri vanozoisa makodhi avo kwendege dzendege mbiri, dzinoshanda pakati peBahrain neIstanbul.
Mutevedzeri Mukuru weGulf Air, Captain Waleed Abdul Hameed Al Alawi, akatambira chibvumirano chekodeshare achiti; “Kupinda muchibvumirano chekodeshare neTurkey Airlines idanho rakanaka rekufambira mberi kweGulf Air, iyo yatinopa vaenzi vedu mukana wakakura wekubatanidza kwendege tichisimbisa nekuvandudza hukama hwedu hwekutengesa. Vatakuri veGulf Air ikozvino vanokwanisa kubatana kunzvimbo dzakasiyana siyana kuburikidza neiyi codeshare nendege mbiri, vachivapa sarudzo huru, nyore uye vasina ruzivo rwekufamba. "
Mutevedzeri Wachigaro weTurkey Airlines uye CEO, VaBilal Ekşi vakati; "Tinofara kusaina chibvumirano ichi chekodhi neGulf Air uye tinangwa kusimudzira kudyidzana kwedu kuti tiwedzere mikana yekufamba inopihwa kune vatinofamba navo kuburikidza netigeti dzendege. Zvakare, tinotenda kuti kudyidzana neGulf Air kunounza mubatsiro unoshamisa kwendege dzese kubva mune zvekutengeserana mukudyidzana kuri kukura pakati penyika dzedu. " VaEcşi vakasimbisawo kuti chibvumirano chekodeshare chichawedzera kudyidzana kwenhandare iyi neGulf Air, mutakuri wenyika yeHumambo hweBahrain uye vakaratidzawo tariro yavo yekuti chibvumirano ichi chinobvumidza Turkish Airlines kuhwina vafambi vakawanda mudunhu iri.